Akuseyona kuyadingeka namuhla ngakho uhlupho sifune futhi izimpahla ezitolo, avele angene kwi-Inthanethi. Ngesikhashana nje, imikhiqizo eminingi kalula lutholakale World Wide Web. Namuhla ayikho umuntu akazi mayelana uthenga ku-intanethi. Ngempela, sibonga bethenga online, ungakwazi ukuthenga lutho kusuka induduzo ekhaya kanye nqampuna umhlabeleli. Nje izinkinobho ezimbalwa, futhi izimpahla ezidingekayo, hhayi kuphela wathenga, kodwa futhi oda ekhaya kwezidingo. Elula, akunjalo?
Nokho, lokususa abalulekile yini oyithenge, ngokuqinisekile izindleko zabo nokwehlisa siqu (noma umndeni) isabelomali. Kodwa indlela yokunciphisa udoti futhi uqhubeke ukujabulela yezitolo? Igcina nge Wildberries wenze ukuthenga kujabulise futhi kakhulu ukunciphisa imfucuza. Kanjani? Konke ulula.
Uma usuvele wenza ukuthenga nge-Internet, kuba okuthi sihlaselwe okungenani kanye neqiniso lokuthi uma uthenga umkhiqizo udinga ukufaka ikhodi yephromoshini. Uma kungenjalo, khona-ke Kuhle kokusho ukuthi ikhodi yokuphromotha ubhekwa iqoqo izinhlamvu nezinombolo, ikuvumela ukuba bathenge izimpahla at isaphulelo esitolo online (kubukeka sengathi lokhu: o5jdhu58gdj2). isaphulelo esinjalo sinikezwa ngokuphelele mahhala ngqo esitolo lapho uya ukuthenga umkhiqizo ukuze ahehe amakhasimende amasha futhi ukhuthaze amadala. Kukhona alahlwayo, esebenza futhi has kwephromoshini. Awuzange sikubone okunje? Eqinisweni, amakhodi yokukhangisa endows amakhasimende ayo cishe zonke izitolo inthanethi. Kodwa, ngaphezu, kukhona ezimbalwa ongakhetha efana ungathola kuzo:
Thola umkhiqizo ofanele noma esitolo kwiwebhusayithi ozinikele, nazi ezinye zalezi zizathu: promkod.ru, promokodus.ru, bonoffer.ru nabanye.
Landelela newsletter futhi sigcine ulwazi olufanele mayelana nabo.
Thola isikhathi sokubhalisa 9 uhlelo olufana nalolo kusayithi lokulondoloza).
izinhlobo eziningi Promo amakhodi, kungaba isaphulelo noma isipho, mhlawumbe ngohlobo ibhonasi imali ku-akhawunti.
Kungani ukuba Wildberries inzuzo
Ekuqaleni kwalesi sihloko sishilo, imali kusukela Wildberries isixazululo ngempumelelo, singasho nakakhulu zinhle. Lezi zitolo Ziningi okuhlukile izaphulelo, letisebenta kanyekanye futhi kakhulu imali yakho. Ngaphezu izaphulelo nsuku zonke, izaphulelo for non-cash indlela yokukhokha kanye ukunqwabelana, kukhona, yebo, kanye izaphulelo kuma khodi yephromoshini. Amakhodi ephromoshini ngokuvamile zabelwa uhlobo othize lomkhiqizo, kodwa kwenzeka kanye nazo zonke izimpahla ithengwa esitolo. Uma kakade ebhalisiwe uthenge izimpahla, ikhodi yokuphromotha ungathola ukuthi e-mail noma ucingo lwakho (uma ubhalisele). Ngaphezu kwalokho, uma ubalula usuku lwakhe lokuzalwa, uqiniseka ukuthola ibhonasi igama ngosuku lwabo. Ungafunda njalo futhi ufunde izipesheli entsha yokukhangisa kusayithi esigabeni "Izaphulelo kanye izikhundla."
Ngokuvamile, inani kwephromoshini ku-Internet iyithuluzi eliwusizo omkhulu, uma kungekhona ubuvila bese uyazama ngokwakho, ungakwazi ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo nge isaphulelo ezinhle. Futhi iqhaza ekuphishekeleni ikhodi Promo elilandelayo ukuze uthole injabulo esiphezulu.